Hayayaashii Steering, LHD hayayaashii Steering, saar Steering, Drive usheeda dhexe, rafaasad usheeda dhexe - Naifu
NFYO-Beijing NaiFu Enterprise Co., Ltd takhasusay CV Joint, CV dariiq dhexaad, isteerinka awood Haydarooliga, bamka shukaanta iyo iwm NFYO leeyahay waayo aragnimo 20 sano ku soo saarka. Waxaa jira in ka badan 500 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan in ka badan 30 injineero ka tirsan kuwaas oo bixiya mashaariicda design cusub oo loogu talagalay macaamiisha our oo dhan ka ah dadaalka iyo hal-abuur our.
Inay ku baaqaan in tayo sare iyo heerka "eber" com ...
saaraha Professional of CV Joint, CV dariiq dhexaad, isteerinka awood Haydarooliga, Products bamka isteerinka ka badan 20 sano.
Waxaa jira in ka badan 500 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan in ka badan 30 injineero ka tirsan kuwaas oo bixiya mashaariicda design cusub oo loogu talagalay macaamiisha our oo dhan ka ah dadaalka iyo hal-abuur our.
waxyaabaha Our ayaa maray Certification Caalamiga ah ee ISO9001, QS9000, TS16949 iyo iwm waxyaabaha Our leedahay dhammaan noocyada kala duwan ee noocyada baabuurta, sida Yurub, America, Japan, Korea taxane.